'Gay Marriage Caused Floods' ကောင်စီဝင်ဗြိတိန်မှာဆိုင်းငံ့ထား - သတင်း Rule
'' ဂေးအိမ်ထောင်ရေးရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပေါ်စေ’ ကောင်စီဝင်ဗြိတိန်မှာဆိုင်းငံ့ထား
Anti-လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗြိတိန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ပါတီ (UKIP) လိင်တူချင်းတရားဝင်လက်ထပ်ဖို့အစိုးရရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမကြာသေးမီကရေလွှမ်းအပြစ်တင်တဲ့သူဒေသခံတစ်ဦးကောင်စီဝင်ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်.
ဒါဝိဒ်သည် Silvester, လိင်တူလက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ပြုပါရန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပြောင်းရွှေ့မှာဆန္ဒပြဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီထဲကနေထွက်ပြေးသူတစ်ဦး မှစ. ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန်, ဗြိတိန်ခဲ့ပြောဆိုထားသည် “မုန်တိုင်းများဖြင့်အမည်ခံ” မကြာသေးခင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းဥပဒေသစ်ဘုရားသခင့ဒေါသထွက်မိသောကြောင့်.
“ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် (ကင်မရွန်ရဲ့) လူမြိုး၏ကြီးမားသောကျိူးသက်ရောက်မှုရှိလာမုန်တိုင်းများနှင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုများကညှဉ်းဆဲကြပြီကြောင်းအပြစ်တင်,” နှစ်သစ်ကူးဧဝကို, Henley-on-Thames အတွက်မြို့ကောင်စီ၏တစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်အဖွဲ့ဝင်, လန်ဒန်အနောက်, မိမိအဒေသခံသတင်းစာတစ်ခုစာ၌ရေးသားခဲ့သည်.
UKIP စပိုင်းတွင်သူ၏အထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် Silvester ၏လက်ျာထောက်ခံ, ဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဥရောပသမဂ္ဂပါတီယခုသူ့ကိုရပ်ဆိုင်းထားရန်အရေးပေါ်အမိန့်အာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်.
“ကျနော်တို့ပါတီအားဖြင့်မျှဝေကြသည်မဟုတ်သောသူတို့၏အငြင်းပွားဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်တွေကိုမြှင့်တင်ရန်ဖို့ UKIP အလံကို အသုံးပြု. မဆိုတစ်ဦးချင်းစီရှိသည်မဟုတ်နိုင်,” ကပြောပါတယ် ရော်ဂျာ Bird ကို, အရှေ့တောင်ဘက်ကအင်္ဂလန်အတွက်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦး.
ငှက် Silvester နောက်တဖန်အင်တာဗျူးတွေမပေးရန်ပါတီအမိန့်ကိုကြိမ်းပခဲ့သူကဆက်ပြောသည်, လိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်ကြောင်းရောဂါခဲ့သည်တနင်္ဂနွေဘီဘီစီရေဒီယိုပြောပြ “အနာကိုငြိမ်းစေ”.
UKIP အစွန်းရောက်ဆွဲဆောင်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုပယ် shrug ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့သည် — ကင်မရွန်တခါ၏အုပ်စုတစုအဖြစ်သူတို့ကိုသရော်နေ “fruitcakes, loonies နှင့်ဗီရိုလူမျိုးကြီးဝါဒ”.
သို့သော်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ပတ်သက်. ပို. ပို. ဦးနှောက်အာရုံကြောများမှာ, အဘယ်သူ၏ဆန့်ကျင်အီးယူနဲ့ anti-လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျများတဖြည်းဖြည်းမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့ကြပြီ.
UKIP ခေါင်းဆောင် Nigel Farage တစ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းကြေညာသည်အဖြစ် Silvester ရဲ့ရပ်ဆိုင်းမှု လာ. , “အစွန်းရောက်, အကုန်လုံးသို့မဟုတ် barmy” လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ပါတီထံမှအမြင်များ.
Farage သူတို့အလားအလာပါတီအရှက်နိုင်သောကြောင့်, လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ငါးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရပ်တည်ရန်မဟုတ်အတင်းအဓမ္မခံခဲ့ကြကြောင်းတနင်္ဂနွေသတင်းစာအပေါ်နေမင်းကပြောသည်.
တနင်္ဂနွေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတစ်ဦးက ComRes စစ်တမ်း UKIP ဘို့မြင့်တက်ထောက်ခံမှုပြသ, အတူ 19 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့ကိုကျောထောက်နောက်ခံရာခိုင်နှုန်းက 30 အကွန်ဆာဗေးတစ်ဘို့ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 35 အတိုက်အခံအလုပ်သမားပါတီများအတွက်ရာခိုင်နှုန်းက.
လိင်တူစုံတွဲတွေအတွက်လူထုအခြေပြုမိတ်ဖက်ကတည်းကဗြိတိန်တွင်တရားဝင်ဖြစ်ရပြီ 2005, သူတို့ကိုလူထုအခြေပြုအိမ်ထောင်မှာဖြောင့်စုံတွဲမှတူညီအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များပေးခြင်း.
သို့သော်စည်းရုံးလှုပ်ရှားကွဲပြားမှုမှထောက်ပြခဲ့, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးမခေါ်မှမနိမ့်ဆုံးသူတို့၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း “လက်ထပ်ထိမ်းမြား”.
ဤဆောင်ပါး, '' ဂေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်စေ’ ကောင်စီဝင်ဗြိတိန်မှာဆိုင်းငံ့, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
15621	0 ကွန်ဆာဗေးတစ်, ဒေးဗစ်ကင်မရွန်, Nigel Farage, Rodger Bird ကို, နှစ်သစ်ကူးဧဝကို, နေ, ဗြိတိန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ပါတီ, UKIP
← မှာ-အိမ်မှာစမ်းသပ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကူညီပါနိုင်ပါစေ အကောင်းဆုံးအလေးချိန် Gain ဗီဒီယိုများ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း7စိတ်ကြိုက် →